Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) - Hello Sayarwon
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 18/09/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးကြောဖောင်းဆိုတာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့အဓိကသွေးကြောမကြီးဖြစ်တဲ့ အေအောတားဆိုသော သွေးကြောကြီးဖောင်းထွက်နေတာပါ။ သွေးကြောမကြီးအလုပ်ကတော့ အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝတဲ့ သွေးတွေကို ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ပို့ဆောင်ပေးရတာပါ။ ယင်းသွေးကြောက ဆွဲဆန့်ခံထားရပြီး လျော့ရဲ့နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရှိတာကြောင့် ပေါက်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ သွေးကြောမကြီးပေါက်ကွဲသွားမယ်ဆိုရင် သေစေနိုင်လောက်တဲ့ သွေးထွက်ခြင်းမျိုးကြုံတွေ့ရမှာပါ။
သွေးကြောမကွဲတယ် (Aortic dissection) ဆိုတာ နှလုံးကနဲ့ထွက်နေတဲ့ သွေးကြောမကြီးစုတ်ပြဲသွားတာကိုခေါ်တာပါ။ သွေးတွေဟာ သွေးကြောမကြီးရဲ့ စုတ်ပြဲနေတဲ့နေရာကနေ ဒလဟောထွက်နေပြီး အတွင်းနဲ့အလယ်လွှာတွေကို ကွဲထွက်သွားစေပါတယ်။ အပြင်လွှာကိုပါထပ်ဖောက်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ သေဖို့များသွားပါပြီ။
Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ယင်းအခြေအနေကသိပ်တော့ အဖြစ်မများလှပါဘူး။ အများဆုံးဖြစ်တာကတော့ အသက်၆၀နဲ့၇၀၀န်းကျင်ယောက်ျားတွေမှာပါ။ အန္တရယ်ရှိအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွေးကြောကွဲခြင်းလက္ခဏာတွေက နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်းလိုမျိုး နှလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ခွဲဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ဆွဲဖြဲထားသလိုမျိုး ပြင်းထန်သော ရင်ဘတ်နဲ့ကျောအောင့်ခြင်းမျိုးဖြစ်ကာ လည်ပင်းနဲ့ခါးတို့ကို ပျံ့နှံ့သွားခြင်း
ရုတ်တရက် စကားပြောရခက်ခဲသွားခြင်း၊ အမြင်မကောင်းတော့ခြင်း၊ လေဖြတ်သလို ကိုယ်တစ်ခြမ်းအားနည်းသွားခြင်း ဒါမှမဟုတ် အကြောသေသွားခြင်း
လက်တစ်ဖက်က အခြားတစ်ဖက်ထက် သွေးခုန်နှုန်းအားနည်းနေခြင်း
အထက်တွင်မဖာ်ပြထားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ လက္ခဏာတစ်ခုခုခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာတွေရှိမယ် ဒါမှမဟုတ် မေးချင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တွေ မတူကြပါဘူး။ ကိုယ့်အခြအနေအတွေက် ဘာကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွေးကြောမကြီးနံရံက ပုံမှန်အားဖြင့် ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှုပေါ်လိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သွေးတိုးနဲ့ သွေးကြောကျဉ်းခြင်းလိုမျိုး ပြဿနာအချို့ကတော့ သွေးကြောနံရံတွေကို အားနည်းစေပါတယ်။ ထိုပြဿနာတွေက အသက်ကြီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စုတ်ပြဲခြင်းတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး သွေးကြောနံရံတွေလျော့ရဲကာ အပြင်သို့ဖေါင်းထွက်လာပါတော့တယ်။
သွေးကြောမကြီးကွဲထွက်ခြင်းကို ကွဲတဲ့အစိတ်အပိုင်းပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အုပ်စုနှစ်ခု ခွဲခြားထားပါတယ်။
အမျိုးအစားအေ။ နှလုံးအနီးအနားရှိ အတက်သွေးကြောမကြီးမှာ ကွဲတာဖြစ်ပြီး ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစားဘီ။ အဆင်းသွေးကြောမကြီးမှာ ဖြစ်တာပါ။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်းအန္တရယ်မြင့်မားစေသော အချက်များစွာရှိပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက်။ အသက်၆၀နဲ့၈၀၀န်းကျင်တွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံးပါ။
ကိုကင်းအသုံးပြုခြင်း။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုခဏတာမြင့်တက်စေတာကြောင့် အန္တရယ်ရှိတာပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း။ သွေးကြောမကြီးကွဲခြင်းက ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာလည်း ရှားရှားပါးပါးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဝိတ်တန်းမြင့်အလေးမခြင်း။ ထိုအားကစားနဲ့ အခြားသော အားအလွန်သုံးရတဲ့ အားကစားတွေက သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်စေခြင်းအားဖြင့် သွေးကြောမကြီးကွဲခြင်းအန္တရယ်ကို မြင့်မားစေပါတယ်။
Turner’s syndrome (သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါနှင့် အခြားရောဂါများ)၊ Marfan syndrome (တစ်ကိုယ်လုံးကိုထောက်ပံ့ပေးနေသော တွယ်ဆက်တစ်ရှုးအားနည်းသည့်ရောဂါ) ကဲ့သို့ မျိုးရိုးဗီဇရောဂါများ
Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အသုံးများတဲ့ ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစာရေမျိုပြွန်မှအက်ခိုးရိုက်ခြင်း (TEE)။ ထိုနည်းလမ်းကတော့ အသံလှိုင်းအမြင့်ဖြင့် နှလုံးပုံစံဖော်တာပါ။
စီတီစကင်ရိုက်ခြင်း။ စတီရိုက်ခြင်း ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဖြတ်ပိုင်းဓါတ်မှန်ပုံကို ရရှိစေပါတယ်။ နှလုံး၊ သွေးကြောမကြီးနဲ့ အခြားသွေးကြောတွေကို ပိုမြင်ရအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
သံလိုက်လှိုင်းဖြင့်သွေးကြောပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနည်းပညာ (MRA)။ MRI က သံလိုက်လှိုင်းတွေနဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပုံရိပ်ဖော်တာပါ။ MRA ကတော့ ယင်းနည်းပညာဖြင့် သွေးကြောတွေကို ပုံရိပ်ဖော်တာပါ။
Aortic Dissection (သွေးကြောမကြီးဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသနည်းက သွေးကြောဖောင်းဘယ်လောက်ကြီးတယ်၊ ဘယ်လောက်မြန်မြန်ကြီးနေတယ်ဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ခန္ဓါကိုယ်တွင်းသို့ ထိုးဖောက်မှုအနည်းဆုံးဖြင့် ပျက်စီးနေတဲ့ သွေးကြောအစိတ်အပိုင်းကို ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သွေးကြောဖောင်းသေးသေးလေးတွေက ကွဲနိုင်ခြေနည်းပြီး ဘီတာဘလော့ကာလိုမျိုး သွေးတိုးကျဆေးတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ယင်းဆေးဝါးတွေက သွေးပေါင်ချိန်ကျစေပြီး သွေးကြောနံရံပေါ်မှာ သက်ရောက်နေတဲ့ ဖိအားကို သက်သာစေပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသဖို့မလိုသေးတဲ့အချိန်မှာ အယ်ထရာဆောင်းပုံမှန်ရိုက်ခြင်းက ရုတ်တရက်ဖြစ်လာမယ့် အန္တရယ်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးကြောဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက သွေးကြောဖောင်းခြင်း၊ကွဲခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
လုံခြုံရေးခါးပတ် ပတ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက ရင်ဘတ်တစ်ဝိုက်ကို မထိခိုက်မိအောင် ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန်ဖြင့် စောစီးစွာပြသပါ။ မိသားစုထဲမှာ သွေးကြောမကြီးကွဲခြင်း၊ တွယ်ဆက်တစ်ရှုးပြဿနာတွေ၊ အဆို့ရှင်ပြဿနာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်အား ပြောပြထားပါ။ သွေးကြောမကြီးဖောင်းနေမယ်ဆိုရင် စစ်ဆေးမှုတွေကို ဘယ်လောက်ခဏခဏလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ခွဲစိတ်မှုလိုလားမလိုဘူးလားဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ထားပါ။
မေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတွေကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်စေရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Aortic dissection. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aortic-dissection/basics/definition/con-20032930. Accessed December 28, 2016
Aortic dissection. http://www.healthline.com/health/heart-disease/aortic-dissection. Accessed December 28, 2016
Aortic aneurysm.- Topic overview. http://www.webmd.com/heart-disease/tc/aortic-aneurysm-overview#1. Accessed December 28, 2016